Nahoana No Tsy Mahita Fanavakavaham-bolonkoditra Ao Anatin’ilay Dokambarotry Ny Savony Fanasàna Lamba An’ny Qiaobi Ny Shinoa Sasany. · Global Voices teny Malagasy
Nahoana No Tsy Mahita Fanavakavaham-bolonkoditra Ao Anatin'ilay Dokambarotry Ny Savony Fanasàna Lamba An'ny Qiaobi Ny Shinoa Sasany.
Voadika ny 16 Jona 2016 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, አማርኛ, Español, Français, русский, English
Pikantsary avy amin'ilay dokambarotry ny savony fanasàna lamba Qiaobi. Avy amin'ny Hong Kong Free Press.
Niteraka hatezerana tany ivelan'i Shina momba ny fanavakavahana mibaribary tsy amin-tahotra misy any aminy ny lahatsarin-dokambarotra iray niparitaka be ho anà savony fanasàna lamba, nanehoana lehilahy iray mainty hoditra nasesiky ny vehivavy Shinoa iray ho ao anaty milina fanasana lamba, ary nivoaka avy ao ‘voasasa’ ho toy ny tovolahy Shinoa iray tsara tarehy sy madio hoditra.
Nanao fialantsiny haingana sy nanaisotra ilay dokambarotra ny Qiaobi, mpamokatra ilay savony fanasàna lamba, saingy ny fanambaràna nataony dia niampanga ireo kiana avy any ivelany ho diso nisafoaka loatra tamin'ny fanehoankevitra. Fiarovantena notohanan'ny maro tamin'ireo Shinoa mpampiasa aterineto, izay nilaza fa fahasamihafàna ara-kolontsaina fa tsy fanavakavaham-bolonkoditra no nasehon'ilay dokambarotra, ary nilaza fa tsy ho vitan'ireo Shinoa ny ho mpanavakavaka manoloana ireo mainty hoditra.
Any ivelan'i Shina no afaka jerena ho fanavakavahana io dokambarotra io. Fa aty Shina, zavatra hafa mihitsy. Dokambarotra fotsiny io. Samy manana ny kolontsainy ny firenena tsirairay, ary samihafa ihany koa ny fomba fijery.
Azon'ilay orinasa atao ny mamokatra dokambarotra iray hafa ka manesika lehilahy iray fotsy hoditra sy voloina ao anatin'ilay milina fanasàna lamba. Teneno ry zareo Amerikàna hoe manavakavaka ny fotsy sy ny mainty izahay. Afa-po ianareo izay ?
Tsy misy olana na kely aza io dokambarotra io. Isaorana ianareo tsy manafatra ny politika madion'ny fanavakavaham-bolonkoditra avy any Shina.
Tsy nanandevo velively ny olona mainty hoditra ny olona mavo hoditra, tsy nanery velively azy ireo hanao asa an-terivozona, na nivarotra azy teny an-tsena. Tsy manana Ku Klux Klan na ny fanavakavahana foko [izahay]. Izay tena fahavalonareo marina atrehana. Ny fanavakavahan'ny fotsy hoditra ny mainty hoditra no hany tena fanavakavaham-bolonkoditra. Fahasamihafàna ara-kolontsaina fotsiny ny fanavakavahana ataon'ny mavo hoditra amin'ireo mainty hoditra. Nateraka hanavakavaka volonkoditra ny fotsy.
Mba hanakanana ireo kiana miiba ataon'ny gazety tsy ho lasa olana ara-diplaomatika, notsipihan'ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Raharaham-Bahiny, Hua Chunying, fa tranga maningana fotsiny ilay dokambarotra, ary “mpirahalahy amin'ireo firenena afrikàna” ny Shinoa.
Raha ndeha holazaina fa tranga maningana ilay dokambarora, tsy marina kosa ny fandàvana ny fanavakavahana misy ao Shina atao an'ireo mainty hoditra, ary ny fandàvan'ireo Shinoa “hanam-pifandraisana toy ny mpirahalahy” amin'izy ireny, hoy ireo roa mpianatra momba ny fandinihana ny olombelona ao amin'ny The Initium, sehatra natao ho an'ny asa fanaovana gazety arahana fandalinana.
Saingy, hoy izy ireo manazava, efa lasa zavatra mahazatra io fanavakavahana io ka tsy hain'ny maro amin'ireo Shinoa intsony ny manavaka azy.
Ny antoko kaominista shinoa, rehefa nandray ny fifehezana an'i Shina tamin'ny 1949, dia niezaka mihitsy ny hiaraka/hitambatra amin'ireo “rahalahiny afrikàna voageja” hanohitra ny imperialisma tandrefana. Nahazatra ireo shinoa tomponandraikitra ihany koa ny fampiasàna ny teny hoe “rahalahy” mba ho entiny mamaritra ilay drafitra “Làlam-baovaon'ny Lamba Landy” amin'izao fotoana natao hampiroboroboana ny varotry ny shinoa mitodika mankany Eurasie sy Afrika Atsinanana.
Na izany aza, hita tao Shina ny fitomboan'ny fanavakavahana ny mainty hoditra hatramin'ny nanombohan'io firenena io nanokatra ny toekareny sy nandrindràny kokoa ny fanindrahindràny ny fireneny, hoy ny nosoratan'ireo mpianatra ireo. Nandritry ny andian-taona 1980, betsaka ireo trangam-panavakavahana namelezana ny afrikàna mpianatra tany amin'ireo anjerimanontolo shinoa, hoy izy ireo manazava :
Betsaka ny olona no tsy mahita afa-tsy ny fivoarana tsara tamin'ny 1980 fa adinon'izy ireo izay mitranga any an-katakonana. Ohatra iray amin'izany ny fanentanana tao amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra mba hanenjika ireo afrikàna mpianatra. Ny filazana fisianà “firazanana ambany” no hery nanosika ny fifandonana teo amin'ny shinoa sy ireo afrikàna mpianatra tamin'ny 1980, teo koa ny tsy hafaliana noho ny vatsimpianarana aloa amin'ireo afrikàna mpianatra, ny tahotra hisian'ny fianahan'ny SIDA ary ny fahavononana hiaro ny fahadiovan'ny taranaka shinoa.
Ny 3 Jolay 1979, Maliana iray mpianatra no nodarohan'ny andianà shinoa mpianatra. Nambaran'izy ireo fa fotsy loatra ny lokon-kodiny ka dia notondrahany ranomainty. Lasa ady nifanandrinana teo ivelan'ny toeram-ponenan'ny anjerimanontolo ilay izy, nahitàna 50 vahiny mpianatra andaniny, ary shinoa 24 mpianatra naratra ankilany. Avy eo, an-jatony ireo afrikàna mpianatra no nanao fihetsiketsehana teo amin'ny kianja Tiananmen mba hanaitra ny governemantan-dry zareo tsy handefa intsony mpianatra ho any Shina noho ny toepo henjana be feno fankahalàna afrikàna ananan'io firenena io. Nanome toky i Shina hanatsara ny fanabeazana “mitodika amin'ny sehatra iraisampirenena” ho an'ireo mpianatra tao Shangai, no sady nandà ny maha-trangam-panavakavahana ny zavatra niseho.
Taorian'ny 1979, tsy foana ny fifandonana nifanaovan'ireo shinoa sy afrikàna mpianatra.Teo anelanelan'ny 1979 sy 1989, nisy tranga nitovy tamin'izany niseho tao amin'ireo tanàna toa an'i Nankin, Hefei sy Hanzhou. Isaky ny misy izany, olona anjatony no voarohirohy. Araka izany, ny 29 Desambra1988, shinoa 300 mpianatra tao amin'ny Anjerimanontolo Fianarana Siansa sy Teknolojia ao Huazhong any Wuhan no nitoraka vato ireo vahiny mpiara-mianatra tamin'izy ireo, naharatràna mpianatra iray avy any Sri Lanka. Nanoratra taratasy nitakiany tamin'ny Anjerimanontolo mba handroahana ireo afrikàna mpianatra tao ireo shinoa mpianatra ireo, satria “manohintohina ny fahamarinan-toeran'ny fiarahamonina shinoa ny fisian'ireo afrikàna mpianatra misakaiza amin'ny tovovavy shinoa”. Tantaram-pitiavana misy amin'ireo Afrikàna sy ny tovovavy Shinoa hatrany no vanja mandrehitra ny afon'ireny tranga ireny, notondroina ho “mpamadika ny Shinoa Han” sy “mpivarotena” ireo tovovavy shinoa.
Taorian'ny hetsika demaokratika nataon'ireo mpianatra teo an-kianjan'i Tiananmen tamin'ny 1989, nanenjana mafy ny fitsipika tany amin'ireo toeram-ponenan'ny mpianatry ny anjerimanontolo ireo shinoa manampahefana, ary vokatr'izany dia nifarana ireo fampielezankevitra feno fanavakavahana. Saingy tsy nahafongotra ny fanavakavahana akory ny famoretana ireny fanehoana am-pahibemaso ireny, hoy ireo mpanoratra miaro ny heviny :
Ny fanjavonan'ny fanavakavaham-bolonkoditra mivandravandra dia nanamarika fahambangan'ny fifanakalozankevitra iraisan'ny maro, ny adihevitra ary ny fandinihana ny fanavakavahana raikitampisaka ao amin'ny shinoa, izay lasa toy ny fanavakavahana manara-penitra atao amin'ny “firazanana ambany” amin'izao fotoana izao.
Tsipihan-dry zareo fa nitàna toerana goavana ny aterineto tamin'ny fanaovana io fanavakavahana io ho fenitra :
Nizara tanteraka ny fomba fijeriny mankahala ny mainty hoditra ireo shinoa mpisera amin'ny aterineto. Soratan'izy ireo fa ny fifindramonin'ireo mainty mankany shina no tena loza goavana mitatao ho an'ny taonjato faha-21, ary resahan'izy ireo ho toy ny “resaka na maty na velona izy io ho an'ny firenena sy ho an'ny taranaka shinoa”. Ao amin'ny Jinjian, sehatra natao hifampiresahana, misy vondrom-piarahamonina virtoaly natao ho an'ireo mpanaradia ny antoko kaominista shinoa, ny tanànan'i Guangzhou “anjakazakan'ny” mainty [izay ahitàna afrikàna betsaka indrindra] no lohahevitra mahamay mitàna ny toerana voalohany ho an'ireo tovovavy mpisera amin'ny aterineto.
Naorina teo ambonin'ny resaka foko ny nasionalisma shinoa. Ao anatin'ny andiany novokariny, ny sariitatra ety anaty aterineto Year Hare Affair dia mampiseho Afrikàna roa amin'ny endrika hipopotàma — biby kamo sy adala. Notsotsorina ho toy ny fanavotana farany ihany koa ny fanampian'i Shina an'i Afrika satria “nandà tsy hiaraka hilalao amintsika ny tontolo voalohany”. Ny firaisana ara-nofo sy ny fananahana no ivon'ny toepo mankahala ny mainty. Ao amin'ny sehatra fifampiresahana ao amin'ny Baidu, any amin'ny WeChat ary ilay dokambarotra izay resahantsika androany, lokoina ho toy ny fako ireo mainty hoditra, izay mikasa fotsiny ny hiara-mandry amin'ireo vehivavy shinoa. Ireo vehivavy misipa aminà mainty hoditra indray dia lazaina fa mpankafy “zavatra maherihery” na “mahantra sy tsy nandia fianarana”.
Ny kolontsaina shinoa malaza hatramin'ny 1980 koa dia nanamafy ny “lafy maha-mavo” ny shinoa, mifangarika amin'ireo zavabitan'ny fivoarana siantifika sy ny vaninandro maoderina. Ao anatin'ilay lahatsary shinoa fanadihadiana “River Elegy” [Hiram-pisaonan'ny Ony], ohatra, natao hanehoana ny sivilizasiona shinoa mitoboka sy mikatona ny Ony Mavo, raha ny loko mangan'ny ranomasina kosa anehoany ny fiarahamonina tandrefana “demaokratika sy mivelatra”, hoy ireto mpanoratra.
Nandray anjara daholo tamin'ny fisian'ny fanavakavaham-bolonkoditra amin'izao fotoana izao atao amin'ny mainty ao Shina ireny, hoy izy ireo:
Ankehitriny, raha manakaiky ny “fifohazam-panahy goavana ho an'ny firenena shinoa” ilay firenena, efa nihoarana ny tantaran'ireo rahalahy afrikàna ary efa tsy manana ny toerany intsony ny fiheverantenan'ny mavo hoditra ho ambany eo anatrehan'ny fotsy hoditra. Ny shinoa te-hilahatra amin'ny fotsy hoditra, saingy toy ny fotsy, tsy maintsy mipetraka ery ambonin'ny mainty hoditra ry zareo mba hahatratrarana io sata io.